Tabata Interval သည် HIIT Timer | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » Tabata Interval သည် HIIT Timer
Tabata Interval သည် HIIT Timer APK ကို
လုံးဝအခမဲ့ကြော်ငြာ!ဒီ HIIT ကြားကာလ timer နေရာမှာ app ကိုနှင့်အတူနေ့စဉ် (အားကစား) အသက်ရှည်သမျှအခြေအနေများအဘို့ပြီးပြည့်စုံသောအချိန်ကိုက်!
* မတူညီတဲ့အဆင့်နှင့်အတူ Timer Create:
* Cool-Down အဆင့်
* Google ကြံ့ခိုင်မှုပေါင်းစည်းရေး
ဂျီပီအက်စ်ကနေတစ်ဆင့် * မြန်နှုန်း tracker (တည်နေရာဝန်ဆောင်မှု)
* နှလုံးခုန်နှုန်းမော်နီတာ HRM devices များထောက်ခံမှု
(ဘလူးတုသ်စမတ် 4.0 / ပုရွက်ဆိတ် + / Mi Band 1 / Mi Band 2)
* သင့်ရဲ့ပစ်မှတ်နှလုံးခုန်နှုန်း Enter
* Backup ကို function ကို
* တစ်ဦးချင်းစီအဆင့်များအတွက်သီးခြားနှိုးဆော်သံကို Select လုပ်ပါ
* နောက်ခံ running Timer (ချွတ်ပြ), accu စားသုံးမှုလျှော့ချရန်
သော့ခတ်ထားသောမျက်နှာပြင်နှင့်ပြ status bar များအတွက် * အချိန်နှင့်တပြေးညီသတိပေးချက်
* အသံ / တုန်ခါမှု / အသံတုံ့ပြန်ချက်: စမတ်ဖုန်းများ၏အမြင်မလိုအပ်ပါဘူး
* သင့်ကိုယ်ပိုင်တိုင်မား Create ကယ်တင်နှင့်အဖန်ဖန်သည်ဤကိုသုံးပါ
ယလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ခေတ္တနားအဆင့်၏ * ဆုံးဖြတ်အစုံနှင့်မည်သို့မကြာခဏသင်ဤပြန်လုပ်ချင်
* စုစုပေါင်းအချိန် Display ကိုကျန်ကြွင်းအချိန်
တက်ဘလက်များအတွက် * ပံ့ပိုးမှုရှုခင်း mode ကို (setting တွင်သက်ဝင်စေ)
* စကားပြီးစီးခဲ့စုံ၏ output ကိုဒါမှမဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းများ၏သက်ဆိုင်ရာအဆင့်မှ
အဆိုပါ Tabata Timer app ကိုဖွင့်မယ့်အချိန်မှတ်နာရီထက်ပိုပါတယ်။ , သင့်စမတ်ဖုန်းမျိုးစုံတိုင်မား Define သူတို့ကိုသိုလှောင်နှင့်အဖန်ဖန်သူတို့ကိုအသုံးချ: ယောဂနှင့်တရားအားထုတ်လေ့ကျင့်ခန်းသို့မဟုတ်သင်ယူမှု၌သငျယလေ့ကျင့်ခန်းရှိမရှိ။ သင်၏အချိန်ကြားကာလ Define (ပြင်ဆင်မှု, လေ့ကျင့်ခန်း, ခေတ္တနား) ကိုယ်တိုင်နှင့်အတူတူသင့်ရဲ့ထုံးစံယလေ့ကျင့်ခန်းတခုအဖြစ်။
သင့်ရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းမော်နီတာ device ကို app ကိုနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါနှင့်သင့်သွေးခုန်နှုန်း (ဘလူးတုသ်မတ်, ဘလူးတုသ် LE, ဘလူးတုသ် 4.0, ပုရွက်ဆိတ် + သို့မဟုတ်သင့် Xiaomi က Mi Band) စစ်ဆေးပါ။ ထို့အပြင်ယလေ့ကျင့်ခန်းအတွင်းမှာအများဆုံးနဲ့ပျှမ်းမျှနှလုံးခုန်နှုန်းပြသပါလိမ့်မည်။ ယလေ့ကျင့်ခန်းအတွင်းမှာသင့်ရဲ့သွေးခုန်နှုန်းစံတန်ဖိုးကိုလည်းပြက္ခဒိန်တှငျမှတျတမျးတငျထားသနေကြသည်။ ချိန်ညှိတစ်ဦးချင်းသွေးခုန်နှုန်းဇုန်နှုန်းပေးနိုင်သောသင်တန်းအကွာအဝေး။ ကျော်လွန်သို့မဟုတ်ပစ်မှတ်နှလုံးခုန်နှုန်း၏ကျသွားဘို့အသံကသို့မဟုတ်မိန့်ခွန်းကို output ကနေတဆင့်သတိပေးမှုများ။
ဂျက်ခုန်သို့မဟုတ်တခြားကြံ့ခိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများအဘို့, spinning အဘို့, အလေးနှင့်အတူအားကစားရုံ၌သင်တို့၏လေ့ကျင့်ရေး, kettlebell ဘို့အပြင်ဤအားကစား timer နေရာမှာ app ကိုအသုံးပြုပါ! ကြားကာလသင်တန်း, လက်ဝှေ့, သိုင်းပညာ, ကျန်းမာသန်စွမ်းအားကစား, freeletics, HIIT, MMA မှ, tabata, စက်ဘီးစီးခြင်း, အပြေး, Sprint, တွန်း-ups, အလေးမနှင့်အခြားကြံ့ခိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့တူအားကစားဘို့ပြီးပြည့်စုံသော။
အလေး, bodyweight လေ့ကျင့်ခန်း, TRX, spinning, ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား, ခုန်ဂျက်, Boot တက်စခန်းတိုက်နယ်သင်တန်း, သို့မဟုတ်အခြားအဆင့်မြင့်ပြင်းထန်မှုကြားကာလလေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူအားကစားရုံများတွင်လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးဘို့ဤကြံ့ခိုင်ရေး timer နေရာမှာသုံးပါ။
Google ကြံ့ခိုင်မှုနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါအလိုအလျှောက်အားလုံးသင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံ။ သင်တန်း personalize ဖို့နဲ့ Google ကြံ့ခိုင်မှုနှင့်အတူတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်ဖို့တစျရာကျြောလှုပ်ရှားမှုများတဦးကိုရွေးချယ်ပါ။
high-ပြင်းထန်မှုကြားကာလသင်တန်း (HIIT), အစက high-ပြင်းထန်မှုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလေ့ကျင့်ခန်း (HIIE) လို့ခေါ်တဲ့သို့မဟုတ်ကြားကာလသင်တန်း (ထိုင်) Sprint, ကြားကာလသင်တန်းပုံစံ, လျော့နည်း-ပြင်းထန်သောပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလနှင့်အတူပြင်းထန်သောအောက်ဆီဂျင်မဲ့ချေလေ့ကျင့်ခန်း၏တိုတောင်းသောကာလကိုပြောင်းလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုမဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ် ။ HIIT နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ခါတိုင်းလို HIIT အစည်းအဝေးများ 4-30 မိနစ်ကနေကွဲပြားလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားတိုတို, ပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်းတိုးတက်လာအားကစားစွမ်းရည်နှင့်အခွအေနေအဖြစ်တိုးတက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်သည်။  အခြား regimen နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ် HIIT hyperlipidemia နှင့်အဝလွန်ခြင်းကုသ, ဒါမှမဟုတ်ကြွက်သားများနှင့်အရိုးထုထည်ကိုတိုးတက်အောင်အဖြစ်ထိရောက်သောမည်မဟုတ်ပါ။ တချို့ကသုတေသီများလည်း "ဘာသာရပ်လှုံ့ဆျောမှုတစ်ခုအလွန်မြင့်မားတဲ့အဆင့်ကို" HIIT လိုအပ်ပါတယ်သတိပြုပါနှင့်အထွေထွေလူဦးရေလုံခြုံစွာသို့မဟုတ်လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်း regimen များ၏အစွန်းရောက်သဘောသဘာဝသည်းခံနိုင်ခြင်းရှိမရှိမေးခွန်းထုတ်သည်။
- Backup ကို / restore menu ကိုလုံးဝပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော
- app ကို optimization ကို turn off ဖို့ setting တွင်နယူး menu ကိုကို item
(သင်နောက်ခံ app ကို run နေပြဿနာများရှိသည်သာလျှင်)
Tabata Interval သည် HIIT Timer
timer Plus အား - ...